महिलाको जस्तै अब पुरुषको पनि गर्भनिरोधक चक्की – Pahilo Page
महिलाको जस्तै अब पुरुषको पनि गर्भनिरोधक चक्की
२२ चैत्र २०७५, शुक्रबार १७:०१ 2565 पटक हेरिएको
काठमाडौं, २२ चैत । पुरुषले सेवन गर्ने गर्भनिरोधक चक्की मानवमा गरिने सुरक्षा सम्बन्धी प्रारम्भिक परीक्षणमा सफल भएको दाबी एउटा प्रसिद्ध चिकित्सकीय सम्मेलनमा गरिएको छ । पुरुषहरूका लागि परिवार नियोजनका लागि कन्डम र भ्यासेक्टमी मात्रै रहेको अवस्थामा यो चक्की एउटा स्वागतयोग्य साधन हुनेछ ।
दैनिक एकपटक सेवन गर्नुपर्ने सो चक्कीमा शुक्रकीटको उत्पादन रोक्ने हर्मोन हुन्छ । तर एन्डोक्राइन सोसाइटीको वार्षिक सम्मेलनमा सो चक्की बजारमा उपलब्ध हुन अझै एक दशक लाग्नसक्ने बताइएको छ । ब्रिटेनमा ५० वर्षभन्दा अगाडि महिलाहरूले सेवन गर्ने गर्भनिरोधक चक्की उपलब्ध भएको थियो । तर किन पुरुषले सेवन गर्ने चक्की बन्न गाह्रो भएको होला ?
कसैले सामाजिक र व्यापारिक रुची कम भएका कारण नबनाइएको दाबी गरे पनि सर्वेक्षणहरूमा धेरै पुरुषले उपलब्ध भए त्यस्तो चक्की प्रयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । महिलाहरूले पुरुषले चक्की खाएको कुरा पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन् भन्ने अर्कै विषय हो ।
सन् २०११ मा ब्रिटेनमा गरिएको एक अध्ययनमा झण्डै आधा महिलाले त्यस्तो चक्की उपलब्ध भएमा आफ्ना पुरुष साथीले त्यो खाए वा नखाएकोमा चिन्ता लाग्ने बताएका थिए । पुरुषले सेवन गर्ने चक्की बनाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको त्यसले यौनइच्छा वा उत्तेजनामा असर नपार्ने बनाउनु हो ।
पुरुषको अण्डकोषमा नियमित शुक्रकीट उत्पादन हुन्छ । त्यसमा हर्मोनको विशेष भूमिका हुन्छ । हार्मोनको मात्रा नघटाई अरू कुनै नकारात्मक प्रभावबिना नै शुक्रकीटको उत्पादन अस्थायी रूपमा रोक्नु प्रमुख चुनौती हो ।
हाल एलए बायोमेड र वाशिङ्टन विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान भइरहेको उक्त चक्कीले भने सोचिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाई छ । उनीहरूले चालीस पुरुषमा भएको प्रारम्भिक सुरक्षापरीक्षण उत्साहवद्र्धक रहेको एन्डोक्राइन सोसाइटीको सम्मेलनमा बताए ।
एन्ड्रजन हर्मोनमा आधारित चक्की सेवन गरेकाहरूमा शुक्रकीट उत्पादनका लागि आवश्यक हर्मोनको स्तर नक्कली चक्की सेवन गरेकाको तुलनामा निकै कम रहेको थियो भने परीक्षण सम्पन्न भएपछि सामान्य अवस्थामा फर्केको थियो । पाँचजना पुरुषले चक्कीको प्रयोगपछि यौनइच्छामा कमी आएको बताएका थिए भने दुई जनाले लिङ्गमा हुने उत्तेजनामा कमी आए पनि यौन क्रियाकलापमा भने असर नपरेको जानकारी दिएको कुरा बीबीसी न्यूज अनलाइनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रात्रिभोजमा सहभागी
तनुश्री दत्तालाई कपडा उतारेर डान्स गर्न निर्देशन
साउदी अरबमा काम गर्न जाने नेपालीको न्यूनतम ज्याला बढ्यो
बच्चाहरुमा यस्तो लक्षण मेल खाएमा उनीहरुसँग बसेर कुरा गर्न उचित
रोनाल्डोले भायाडोलिड नै किन किने त ?
राष्ट्रगानका बेला उभिन अस्विकार गरिन् ९ वर्षकी एक स्कूले छात्राले
जागिर जाने डरले इन्जिनियरले आत्महत्या गरेपछि पिएचडी गरेकी प्रेमिकाले पनि प्राण त्यागिन्